Wararka - Soo-gaadhista iswaafajinta
MAXAY CAMERA U BAAHANTAHAY “Xakamaynta iswaafajinta”
Dhamaanteen waan ognahay inta lagu jiro duulimaadka, diyaaradaha aan duuliyaha laheyn inay siin doonaan calaamadda kicinta shanta muraayadaha ee kamaradda qallooca. Shanta muraayadaha indhaha waa in aragti ahaan loo muujiyaa iswaafajin buuxda, ka dibna lagu duubaa hal macluumaad POS isku mar. Laakiin geedi socodka hawlgalka dhabta ah, waxaan ogaanay ka dib markii diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ay soo direen calaamadda kicinta, shanta muraayadaha isku mar lama soo bandhigi karo. Maxay tan u dhacday?
Duulimaadka kadib, waxaan ogaan doonnaa in wadarta awoodda sawirrada lagu soo ururiyay muraayadaha indhaha ay guud ahaan kala duwan yihiin. Tani waa sababta oo ah marka la adeegsanayo isla algorithm-ka riixitaanka, kakanaanta qaababka muuqaalka dhulka waxay saameyn ku yeelaneysaa cabbirka xogta ee sawirada, waxayna saameyn ku yeelan doontaa isku duwidda kaamerada.
Tilmaamo qaabab kala duwan
Markuu sii adkaado qaabka ay u egtahay astaamaha, tirada weyn ee xogta kamaradu u baahan tahay si loo xaliyo, loo cadaadiyo, loona qoro., Waxay qaadataa waqti dheeri ah si loo dhameystiro talaabooyinkan. Haddii waqtiga kaydintu gaadho barta muhiimka ah, kamaraddu kama jawaabi karto calaamadda xiritaanka waqtiga, ficil-qaadista-na way fududaanaysaa.
Haddii mudada udhaxeysa labada soo-bandhigi ay ka yartahay waqtiga looga baahan yahay kamaradu inay ku buuxiso wareegga sawirka, kaamiradu way tabi doontaa sawirro la qaaday maxaa yeelay ma dhameystiri karto soo-gaadhista waqtiga. Sidaa darteed, inta lagu guda jiro hawlgalka, tiknoolajiyada xakameynta iswaafajinta kamaradda waa in loo adeegsadaa in lagu mideeyo kaamerada ficilkeeda soo-gaadhista.
R & D ee farsamada xakamaynta iswaafajinta
Markii hore waxaan ogaanay in AT-ka ka dib barnaamijka, qaladka booska shanta muraayadaha indhaha uu mararka qaar aad u weynaan karo, kala duwanaanshaha booska ee kamaradaha ayaa dhab ahaan gaari kara 60 ~ 100cm!
Si kastaba ha noqotee, markii aan ku tijaabinay dhulka, waxaan ogaanay in iswaafajinta kamaradu wali ay aad u sarreyso, jawaabtuna ay tahay mid waqtigeeda ku habboon. Shaqaalaha R & D aad ayey u jahwareersan yihiin, maxay sababta aragtida iyo qaladka booska ee xalka AT uu aad u ballaaran yahay?
Si loo ogaado sababaha, bilowga horumarinta DG4pros, waxaan ku darnay saacad jawaab celin ah kamaradda DG4pros si aan u diiwaangelino farqiga waqtiga u dhexeeya calaamadda kicinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo soo bandhigidda kamaradda. Waxaana lagu tijaabiyay afarta xaaladood ee soo socda.
Muuqaalka A: Isku midab iyo muuqaal
Muuqaalka C: Midab isku mid ah, qaabab kala duwan
Muuqaalka D: midabbo iyo qaabab kala duwan
Jadwalka natiijada tirakoobka
Muuqaalada midabbada hodanka ah leh, waqtiga looga baahan yahay kamaraddu inay ku sameyso xisaabinta Bayer iyo qorista ayaa sii kordheysa; halka muuqaalada leh xariiqyo badan, sawirka sawirka soo noqnoqda badan aad buu u badan yahay, waqtiga looga baahan yahay kamaraduna inuu isku cadaadiyo isna wuu kordhayaa.
Waa la arki karaa in haddii soo noqnoqoshada muunadda kamaraduhu yar tahay oo qaab dhismeedku fududahay, jawaabta kamaraddu waa mid ku habboon waqtiga; laakiin marka soo noqnoqoshada muunad qaadista kamaraddu sarreyso oo qaabdhismeedkeeduna adag yahay, waqtiga-kala duwanaanshaha jawaabta kamaraddu aad buu u kordhayaa Iyo sida inta jeer ee sawir qaadista loo sii kordhayo, kaamirada ayaa aakhirka seegi doonta sawirro laga qaaday.
Mabda'a xakamaynta iswaafajinta kamaradda
Iyada oo laga jawaabayo dhibaatooyinka kor ku xusan, Rainpoo wuxuu ku daray aaladda xakamaynta jawaab celinta kamaradda si loo wanaajiyo iswaafajinta shanta muraayadaha indhaha.
Nidaamku wuxuu cabbiri karaa waqtiga - T "farqiga u dhexeeya" diyaaradda aan duuliye wadin waxay dirtaa calaamadaha kicinta iyo waqtiga soo-gaadhista muraayadaha kasta. Haddii waqtiga "T" ee shanta muraayadaha indhaha ay ku kala duwan yihiin inta la oggol yahay, waxaan u maleyneynaa in shanta muraayadaha indhaha ay si isku mid ah u shaqeynayaan. Haddii qiime-celin qaas ah ee shanta muraayadaha indhaha ay ka weyn tahay qiimaha caadiga ah, qaybta xakamaynta ayaa go'aamin doonta in kamaraddu leedahay kala duwanaansho-waqti-weyn, iyo soo-gaadhista xigta, muraayadaha ayaa magdhow ahaan loo siin doonaa iyadoo la eegayo farqiga u dhexeeya shanta muraayadaha indhaha ayaa si isku mid ah u soo bandhigi doona isla markaana kala duwanaanshaha waqtiga ayaa had iyo jeer ku dhex jiri doona heerka caadiga ah.
Codsiga xakamaynta isdhaafsiga ee PPK
Kadib xakamaynta iswaafajinta kamaradda, mashruuca sahaminta iyo khariidaynta, PPK waxaa loo isticmaali karaa in lagu yareeyo tirada dhibcaha kontoroolka. Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira seddex qaab oo isku xirnaanta ah oo loogu talagalay kamaradda qasabka ah iyo PPK:
1 Mid ka mid ah shanta muraayadaha indhaha wuxuu ku xiran yahay PPK
2 Dhammaan shanta muraayadaha indhaha waxay ku xiran yihiin PPK
3 U adeegso tiknoolajiyada xakamaynta isuduwaha kamaradda si aad ugu celiso celceliska qiimaha PPK
Mid kasta oo ka mid ah saddexda ikhtiyaar wuxuu leeyahay faa'iidooyin iyo faa'iido darro:
1 Faa'iidada waa mid fudud, faa'iido darrida ayaa ah in PPK kaliya uu matalayo booska bannaan ee hal-lens. Haddii shanta muraayadaha indhaha aan la iswaafajin, waxay sababi doontaa qaladka booska muraayadaha kale inuu weynaado.
2 Faa'iidada sidoo kale waa mid fudud, meelayntu waa sax, cillad darrada ayaa ah inay kaliya bartilmaameedsan karto qaybo kala duwan oo gaar ah
3 Faa'iidooyinka ayaa ah meelaynta saxda ah, kala duwanaanta sare, iyo taageerada noocyada kala duwan ee qaybaha kaladuwan. Faa’iido darrada ayaa ah in xakamaynta ay ka sii dhib badan tahay oo kharashkuna aad u sarreeyo.
Hadda waxaa jira diyaarad aan duuliye lahayn oo adeegsata loox 100HZ RTK / PPK. Guddigu wuxuu ku qalabeysan yahay kamarad Ortho ah si loo gaaro 1: 500 khariidad jaangooyooyin kantarool-dhibic-la'aan ah, laakiin teknoolojiyaddan ma gaari karto gabi ahaanba xakamaynta-dhibic-la'aan sawir-qaadista. Sababtoo ah qaladka isuduwaha ee shanta muraayadaha laftooda ayaa ka weyn saxitaanka meelaynta ee kala duwanaanta, markaa haddii aysan jirin kamarad iskudhafan oo isku dheelitiran, farqiga udhaxeeya sare waa macno la'aan ……
Waqtigan xaadirka ah, habkan xakamaynta ayaa ah xakameyn dadban, magdhowgana waxaa la sameyn doonaa oo keliya ka dib marka qaladka isku xirnaanta kamaradda uu ka weyn yahay heerka ugu macquulsan. Sidaa darteed, muuqaallada leh isbeddellada ballaaran ee muuqaalka, waxaa hubaal ah inay jiri doonaan khaladaad dhibic shaqsiyeed oo ka weyn marinka. Jiilka soosocda ee alaabada taxanaha ah ee Rie, Rainpoo waxay soosaartay hab xakameyn cusub. Marka la barbardhigo habka xakamaynta hadda, saxnaanta isku xirnaanta kamaradda waxaa lagu horumarin karaa ugu yaraan amar baaxad leh oo gaara heerka ns!
Hore:Sidee GSD iyo noocyada diyaaradaha aan duuliyaha wadin u saameeyaan saxsanaanta qaraabada qaabka 3D
XigaSadarka R & D ee taxanaha wax soo saarka Rainpoo